iOS 11 application အချို့နှင့်ကြုံတွေ့ရသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းသည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
ကျနော်တို့အနီးကပ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏ယောက်ျားလေးများ၏နောက်ဆုံးထုတ်လွှတ်၏လုပ်လျက်ရှိသည်သောစမ်းသပ်မှုအားလုံးကိုအောက်ပါနေကြသည်။ ကိရိယာအသစ်များကိုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အက်ပလီကေးရှင်းတိုးတက်မှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း ပြီးတော့အရာအားလုံးဟာ iPhone အသစ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ မင်းတို့လည်းမင်းတို့ရဲ့အသစ်စက်စက်ကိုအသစ်ပြန်လုပ်နိုင်တယ် devices များ နောက်ဆုံးပေါ် iOS ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များရရှိခြင်း.
iOS 11 ဟာစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်တွေကိုယူဆောင်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အိုင်ပက်ဒ်အဆင့်မှာအက်ပဲလ်မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေအတွက်လည်ပတ်မှုစနစ်အသစ်တစ်ခုပါ။ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေပေးတယ်။ နွေရာသီတွင်ကျွန်ုပ်တို့၌လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်အက်ပဲလ်၏ iOS 11 လည်ပတ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန် beta ဗားရှင်းကိုးခုရှိခဲ့သည်။ လုံးဝမပြည့်စုံပါ၊ ထူးဆန်းသောသတင်းပို့သူများစွာရှိသည်။ ဒီ iOS 11 အသစ်ရဲ့လည်ပတ်မှုပြwithနာ။ ခုန်ချပြီးနောက်တွင်သင့်အားတင်ပြလာသောပြproblemsနာများအားအသေးစိတ်ပြောပြပါမည် သူတို့ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ.
1 iOS 11 ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန် settings ကိုပြန်ထားပါ
2 ခြစ်ရာကနေ install အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်
iOS 11 ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန် settings ကိုပြန်ထားပါ
များစွာသောသုံးစွဲသူများသည် network channel အမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့်သတင်းပို့ကြသည် လျှောက်လွှာများဖွင့်လှစ်ပြနာများ, ပြTheနာက third-party application များနှင့်သာမက Apple ၏ iOS နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ နှေးနှေး, လျှောက်လွှာ crash ... အများအပြားရှာတွေ့သောအဆုံးမဲ့အမှားများကို။
သိသာထင်ရှားတဲ့ကဒီသုံးစွဲသူတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူး၊ ငါဒီပြproblemsနာအချို့ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်, ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည် သင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad ၏ချိန်ညှိချက်များကိုပြန်ယူပါ။ Device Setting ကို Restore လုပ်ခြင်းက iOS တစ်ခုမှတစ်ခုသို့တစ်ခုသို့ update လုပ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ device မှဆွဲယူသောပြproblemsနာများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ဒီအတွက်ငါတို့သွားရမယ် ချိန်ညှိချက်များအက်ပ်ပြီးတော့ငါတို့ရိုက်ထည့်ပါ အထွေထွေ -> ပြန်လည်စတင် -> ချိန်ညှိမှုများကိုပြန်လည်သတ်မှတ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် iPhone သို့မဟုတ် iPad ၏ချိန်ညှိချက်များ (အမှားအယွင်းများအများစုကိုပြင်ဆင်သင့်သည့်အရာ) ကိုသိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်သော်လည်းသိမ်းဆည်းထားသောဒေတာများမဟုတ်ပါ။
ခြစ်ရာကနေ install အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ချိန်ညှိချက်များကိုပြန်ယူခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ပါ…နောက်တစ်ခုက iOS ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်တိုင်းတိုင်းမှာအဲဒါကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ပေးပြီးပါပြီ။ အဓိကလည်ပတ်မှုစနစ်ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းကိုကြည့်ရင်၊ ကခြစ်ရာကနေ install လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ မင်း iPhone မှာသိမ်းထားတဲ့အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒါကကြီးမားတဲ့ပြproblemနာတော့မဟုတ်ပါဘူး သင့်ရဲ့ iCloud မှာသင့်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်အများကြီးရှိရင် (ကျွန်ုပ်တို့သည်အရန်ကူးခြင်းများအကြောင်းမဟုတ်ဘဲထပ်တူပြုထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်) ထို့အပြင်သင် ထပ်မံ၍ ရှိသည့်အပလီကေးရှင်းအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ကုန်ရလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » အချို့သော application များအတွက် iOS 11 ပြXNUMXနာကိုဖြေရှင်းပါ
ငါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ iPhone အရမ်းပူလာပြီးဘက်ထရီကသိပ်မကြာလိုက်ဘူး။
Pepe, ငါမှာ Iphone7ရှိပြီး iOS2 နဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂ နာရီလောက်ဘက်ထရီပျောက်သွားတယ်။
Augmented Reality အက်ပ်များကိုဖွင့်သောအခါပူလာကြောင်းကိုလည်းသတိပြုမိသည်
Javier Martin Uribe Ceballos ဟုသူကပြောသည်
Javier Martin Uribe Ceballos အားပြန်ပြောပါ
ios 9,10,11 ... ၏နံပါတ်စဉ်ဗားရှင်းကိုပြောင်းလဲချိန်တိုင်းတွင် scratch မှ install လုပ်ပြီး backup ကိုပြန်မယူပါနှင့်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ဘက်ထရီပြproblemsနာများသုည။ ios ဗားရှင်းများအကြားအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမပြုလုပ်ပါနှင့်၊ အတွင်းပိုင်းစနစ်သည်တည်ငြိမ်မှုမရှိပါ။
ငါကိစ္စမှာဖုန်းပျက်သွားတယ်၊ ငါအချို့စာမျက်နှာတွေမသုံးနိုင်ဘူး၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကျဆင်းသွားတယ်၊ ဘက်ထရီကကြာရှည်မခံတော့ဘူး၊ ငါမကြာခဏပြန်ဖွင့်ရတယ်၊ ဒီအသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်ကိုငါလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
yoana valencia ဟုသူကပြောသည်
အသစ်ပြောင်းခြင်း start key သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ အလွန်ပူလာသည်နှင့်၎င်းကိုမည်သို့ပြင်ဆင်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ
yoana valencia သို့ပြန်သွားပါ
ဒါဟာ Apple ကိုရှုတ်ချချင်တာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်သင်အသစ်တွေ ၀ ယ်နိုင်မယ်၊ အဲဒါကနောက်တစ်ခုကငါထပ်မဝယ်တော့ဘူး၊ သူကအရမ်းဆိုးတဲ့ IOS ကို update လုပ်ချင်တဲ့အချိန် ၃ ရက်လောက်ရှိနေပါပြီ။
ငါဖုန်းခေါ်လို့မရဘူး (သို့) ငါသူတို့မကြာခင်ဒီပြsolveနာကိုဖြေရှင်းဖို့တစ်ခုခုမလာဘူးဆိုရင်ပြန်လည်စတင်ဖို့အတင်းအကျပ်သုံးတယ်။ ဘယ်သူမှပြwithနာမရှိတဲ့ Android system တစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်။
marco antonio abanto morales ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ iPhone6Plus ရှိတယ်ဗားရှင်း ၁၁.၃ ကိုငါ update လုပ်တယ်။ အချက်ပြမှုပျောက်သွားပြီးကွန်ရက်မပါပဲထွက်သွားတယ်။
ငါကမှားခဲ့ပါတယ် update လုပ်
marco antonio abanto morales အားပြန်ပြောပါ